आकाशले किन छाडे चलचित्र ‘विर विक्रम २’ ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalआकाशले किन छाडे चलचित्र ‘विर विक्रम २’ ?
Home मनोरञ्जन आकाशले किन छाडे चलचित्र ‘विर विक्रम २’ ?
आकाशले किन छाडे चलचित्र ‘विर विक्रम २’ ?
काठमाडौँ : नायक आकाश श्रेष्ठले चलचित्र ‘विर विक्रम २’ छाडेका छन् । केही दिन अगाडि मात्र उनले यो चलचित्रमा काम गर्नका लागि संझौता गरेका थिए । चलचित्रको घोषणा कार्यक्रममा पनि आकाशले चलचित्रमा काम गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताएका थिए ।
तर, उनै आकाशले चलचित्रको छायांकन सुरु हुनु भन्दा केही दिन अगाडि मात्र यो चलचित्र छाडेका छन् । आकाशले दर्शक र चलचित्रको निर्माण टिमसँग माफी माग्दै चलचित्र छाडेका हुन् । उनले निर्देशक मिलन चाम्ससँग काम गर्न पाउनु आफ्ना लागि पनि निकै खुशीको कुरा भएपनि वाध्यताले गर्दा छाडेको बताए ।
आफ्ना हजुरबुबा बिरामी भएकाले गर्दा हेरचाह गर्नुपर्ने भएकाले समय दिन गाह्रो भएको आकाशले बताए । चलचित्रमा नाजिर हुसेन, वुद्दि तामाङ, बर्षा सिवाकोटी मुख्य भूमिकामा रहनेछन् । आकाशको ठाउँमा अब कुन नायक आउने हुन्, त्यो चाडै नै थाहा हुनेछ ।
नेविसंघद्वारा कार्यकर्ताको रिहाईको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा छठ पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त